U safraya New Zealand | Travelling to New Zealand | Unite against COVID-19
U safraya New Zealand | Travelling to New Zealand
Xadadka New Zealand waa ay furan yahiin dhammaan 2022 iyaddoon loo baahan in la is go‘doomiyo imaanshaha.
Ku saabsan u safarka New Zealand
Si loogu safro New Zealand, waxaad u baahan tahay inaad buuxiso dhowr shuruudaha ah.
Tallaabooyinka hoose ayaa sharaxaya waxa uu yahay caddaynta aad u baahan tahay si loo bixiyo in la galao New Zealand.
Hababynta waxay isku beddeli kartaa si degdeg ah - Socdaalka New Zealand waxay bixin doontaa macluumamadkii ugu dambeeyay.
U safrida New Zealand | Socdaalka New Zealand (external link)
1. Hubi inaad iman karto New Zealand
Muwaadiniinta New Zealand iyo dadka kale ee safarka ah ee u qalma waxay geli karaan New Zealand iyo is baadhida imaanshaha. Si loo hubiyo haddii aad u qalanto, booqo websaydkaSocdaalka New Zealand.
Badanka dadka u safraya New Zealand. waa inay haystaan dhammaan qabaya tallaalka buuxda ee COVID-19 ee la ansixiyay, in kastoo ay jiraan waxyaabo ka reeban.
Ka hor safarka, hubso baasaboorkaagu inuu ansax yahay. Waxaad u baahan kartaa Masuuliyiinta Safarka Korontada ah ee New Zealand (NZeTA).
Hubi haddii aad u qalanto inaad u safarto New Zealand | immigration.govt.nz (external link)
Shuruudaha tallaalka iyo tallaalada la ansixiyay
Ka codso NZeTA | immigration.govt.nz (external link)
2. Sii qabso safarkaaga
Ka qabso safarkaaga New Zealand.
Hubi xeerka shirkada ee ku saabsan tallaalka, baajinta iyo lacag celinta xaalada qorshayaashaada ay u baahdaan inay is beddelaan.
Sidoo kale waa inaad ka fekertaa iibsashada caymiska safarka haddii ay dhacdo qoorshayaashaada safarka inay saamayso. Waa inaad sidoo kale fekertaa qabshada hoyi ku habboon ee is-karantiilka, haddii taa loo baahdo.
3. Bilow ku dhawaaqa safraha
Dhammaan dadka safrayaa waa inay dhammaystiraan Bayaanka Safraha New Zealand ka hor inta aanad u safrin New Zealand. Dhammaystirkayaga, waxaad laguu soo saari doonaa Kaadhka Safarka.
Bilow dhawaaqida sida degdega ah ee suuragalka ah. Waxaad bilaabi kartaa 28 maalmood kahor inta aadan safrid.
Bilow ku dhawaaqidaada safraha (external link)
Xaashida xaqiiqda ku dhawaaqida qofka safarka ah (external link)
4. Hel baadhitaanka bixida ka jor
Badanka dadka safarka ah waa in laga waayaa COVID-19 baadhitaanka bixida ka hor si ay u galaan New Zealand.
Hubso caddayntaada baadhitaanka ka horaysa bixida inay buuxiso heerarka qiimaynta New Zealand. Waxaad soo dejin kartaa oo daabic kartaa nashqada hoose si loo xaqiijiyo shaqaalaha caafimaadka kormeeraya baadhitaankaaga inay bixinayaan macluumaadka loo baahan yahay.
Waxaa jira qayb sababo ah oo aanad u baahan karin baadhitaanka bixitaanka ka hor. Waxaad ka heli kartaa liiska asbaabaha ansaxa ah ee baadhitaanka bixida ka hor waxa ka reeban hoos. Waxaa lagaaga baahan doonaa inaad muujiso caddaynta ka reebidaada.
Ogow shuruudaha ku saabsan baadhitaanka ka horeeya bixida
Soo deji COVID-19 nashqada baadhitaa bixida ka hor [PDF, 190 KB]
5. Buuxi ku dhawaaqida qofka safarka ah
Si loo dhammaystiro bayaankaaga qofka safarka ah, waxaad u baahan tahay inaad bixiso:
caddaynta tallaalka (haddii loo baahdo)
taariikhda safarka ee 14 maalmood ee la soo dhaafay
faahfaahinta xidhiidhka gudaha New Zealand
faahfaahinta xidhiidhka degdega ah
caddaynta baadhitaanka ka horeeya bixida – iyaddoo ka xor ah mooyaane
Si wanaagsan u hubi faahfaahinta aad gelisay shaacinta safraha s loo xaqiijiyo inay ku habboon yihiin caddayntaada.
Waxaad u baahan doontaa inaad muujiso Kaadhkaaga Safaraha marka aad iska diiwaaniso xaga garoonka diyaarada, iyo Kastamada gudaha New Zealand. Waa la daabici karaa ama lagu kaydin karaa qalabkaaga moobolka. Weli waa inaad sidataa dhammaan warqaddaha kula xidhiidha adiga inaad soo geliso Bayaanka Qofka Safraha ah New Zealand.
Hagaha soo gelinta caddaymahaaga (external link)
6. Xaga garoonka diyaaraha
Waxa ay ku waydiin doonaa haddii aad qabto astaamaha COVID-19 shaqaalaha diyaaradu.
Haddii ay habboon tahay, waxaad u baahan doontaa kaaga:
buuxinta Kaadhka Safarka
caddaynta heerkaaga tallaalka
natiijada baadhitaanka laga waayay safarka ka hor.
7. Imaanshaha New Zealand
Kastamadu waxay xaqiijin doonaa taariikhdaada safarka, natiijada baadhitaanka laga waayay ee bixida ka hor, heerarka tallaalka, Kaadhka Safarka ah, iyo shuruudaha gelida ee kale. Laga reebo qayb daahida markaas oo dhex marto garoonka diyaarada.
Cilmiga ammaanka, waxaa lagu siin doonaa xidhmadaada soo dhawaynta. Xidhamadaada soo dhawaynta waxaa ku jira:
agabka baadhitaanka degdega ah ee antijiinka (RAT)
hagaha baadhitaanka iyo soo gelinta natiijooyinkaaga.
Dhammaystir baadhitaanadaada oo soo geli natiijooyinkaaga sida la gu faray.
Shuruudaha baadhitaanka ka dib imaanshaha New Zealand
Last updated: 20 May 2022 at 2:09 pm